Isingeniso Sokusebenza Kwemishini ye-CNC | I-Blog | I-PTJ Hardware, Inc.
Ikhaya > Blog > Isingeniso sezinto ezibonakalayo
Isizathu Sokuthi Izingxenye Zensimbi Yeshidi Zibuyiselwa Kancane Kancane Ngama-Plastics E-Thermoplastic
Ishidi lensimbi ubuchwepheshe bokucubungula izinsimbi obenza uchungechunge lokucubungula njengokugunda, ukusika, ukubhoboza, nokusonga amashidi wensimbi. Iningi lezinto ezisetshenzisiwe zingamapuleti ensimbi, futhi imikhiqizo esetshenzisiwe isetshenziswa kabanzi, ikakhulukazi embonini yezimoto.
I-Surface Treatment Technology Ye-Aluminium Alloy
I-Aluminium inezinzuzo eziningi njengokuqina okuphansi, amandla aphezulu aqondile, ukumelana okuhle nokugqwala, ukuqhutshwa okuphezulu kagesi nokushisa, ukuqina, ubucwebe obuhle, ukucubungula okulula nokwakha, nezakhiwo ezinhle kakhulu zokuhlobisa. Ingxubevange ye-Aluminium yenziwa nge-aluminium emsulwa ngokungeza ezinye izakhi zokuxuba
Amazinga Wemishini Ye-CNC Esetshenziswa Ngokuvamile Wokudweba Isikhunta
Ukwelula i-die machining kuyinqubo ebaluleke kakhulu yenqubo yokunyathela ukukhiqizwa, futhi ingumkhiqizo osebenzisa ubuchwepheshe. Ubunzima besakhiwo semishini ngokungenakugwenywa buzoholela ekuxakekeni kokuma kwezingxenye zesikhunta. Okulandelayo kuchaza ulwazi mayelana nezindinganiso ze-CNC ezisetshenziswa kakhulu zokudweba imishini yokubumba.
Umehluko Phakathi Kwensimbi Ephakeme Nensimbi yeTungsten
Insimbi esheshayo (HSS) iyinsimbi yensimbi enobulukhuni obuphakeme, ukumelana nokugqoka okuphezulu kanye nokumelana nokushisa okuphezulu, okwaziwa nangokuthi yinsimbi yomoya noma insimbi engaphambili, okusho ukuthi ingaqiniswa noma ipholile emoyeni ngesikhathi sokucima, futhi icijile impela. Ibizwa nangokuthi insimbi emhlophe.
Ulwazi Oluyisisekelo Lokubumba Kokhonkolo Kanye Nokumodelwa Kobumba
I-Gypsum imvamisa amhlophe amhlophe we-powdery, kanye namakristalu aphuzi abomvu ngokubomvu. Kungokwesimiso se-crystal monolithic. Ngokuya ngokwakhiwa, ihlukaniswe yaba yi-dihydrate gypsum ne-anhydrous gypsum. Uhlelo lokusebenza lokukhiqizwa kwesikhunta semboni ye-ceramic ngokuvamile luyi-dihydrate gypsum.
Yini i-GR2 Titanium
I-titanium engu-GR2 iyinsimbi emhlophe esiliva enobuningi buka-4.5g / cm3 (20 ℃) ​​nendawo encibilika ka-1668 XNUMX. Izinto ze-Titanium ne-titanium alloy zinezici zokumelana nokugqwala okuhle, ukuminyana okuphansi namandla aphezulu athile.
Yini iHastelloy C-276
IHastelloy C-276 ingxubevange ye-nickel-molybdenum-chromium-tungsten enokumelana okuhle nokugqwala nezakhiwo ezinhle zokwakha.
Amakhono Wokugaya we-Titanium Alloy
Imishini ye-TC4 titanium alloy inzima kakhulu. Inqubo ebanzi ye-titanium ne-titanium alloy yehluke kakhulu kunensimbi, i-aluminium alloy nezinsimbi eziningi ezisindayo ngokwesakhiwo se-crystal, izakhiwo zomzimba nezakhiwo zamakhemikhali. Ingxubevange iyinsimbi okungelula ukuyicubungula.
Yini i-Inconel 690
I-Inconel 690 (UNS N06690) i-alloy-based alloy inokuqukethwe kwe-chromium okungu-27.0-31.0% kanye ne-alloy-based alloy ene-nickel engaba ngu-59%.
yini inconel 718
I-Inconel 718 iyi-alloy-based alloy engaqiniswa yimvula. Isakhombisa amandla wokukhiqiza okuphezulu, amandla we-tensile namandla okuqhekeka okushisa emazingeni aphezulu okushisa aze afike ku-704 ° C.
Amakhasimende aqala ukuvezwa ezintweni ze-X2CrNiMoN22-5-3 angakhathazeka kakhulu ngokusebenza kweX2CrNiMoN22-5-3. Isibonelo, buyini ubunzima be-X2CrNiMoN22-5-3, ingabe kulula ukuyicubungula noma kunzima ukuyicubungula? Yiliphi ithuluzi okufanele lisetshenziselwe umshini X2CrNiMoN22-5-3. Njengoba izakhi ezahlukahlukene zensimbi engagqwali zinemvelo yokufakwa kwensimbi, ingakhuthaza nokwenza ngcono ukusebenza kwemishini;
I-INCONEL 625 Machinability
INCONEL 625 esuselwa kunickel esekwe njengamanje iyinto ebalulekile yengxubevange ephezulu esetshenziswa kuzicelo ezisezingeni eliphakeme njenge-aerospace, amandla enuzi, nemishini yezempi.
1 2 3 4 5 OLANDELAYO